Global Voices teny Malagasy » Israely : Fitokonana Narahan-kerisetra Tany Tel Aviv #J14 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jona 2012 9:12 GMT 1	 · Mpanoratra Gilad Lotan Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka
Olona an’arivony no nirotsaka an-dalambe tany Tel Aviv ny alin’ny Sabotsy 23 Jona, taorian’ireo fifandonana narahin-kerisetra teo amin’ny mpitolona sy ny mpitandro filaminana ny omalin’iny. Ny Zoma 22 Jona, nikasa ny hiverina hibodo ny lalamben’ny Rothshield tao Tel Aviv miaraka amin’ny tranolay ireo mpitolona ho amin’ny fahamarinana sosialy (#J14) nefa notsenain’ny mpitandro ny filaminana tamin’ny herisetra izany. Nilaza ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana, Yoram Ochion, fa nosakanana io fitokonana io fa tsy “manara-dalàna”.
Niantso ireo mpomba azy  hiaraka hankeo amin’ny kianjan’ny Habima ny tranonkala ofisialin’ny #J14 ny Sabotsy alina:
Ny Zoma 22 Jona, voadaroka ireo ankizy amam-behivavy, ireo olona efa zokinjokiny ary ireo olona mitaintaina noho ny fampiharan'izy ireo ny zony fototra indrindra: ny zo hanohitra.Tongotra mihosin-drà sy mpitolona maro voasambotra no vokatr’io ezaka hametraka tranolay teo amin’ny làlana io. Ezaka mahery setra ataon’ny fanjakana hamotehana antsika mponin’i Israely iny fampiasan-kery tsy mifandaja sy famoretana nahazo antsika androany iny. Nalainy ny fonenantsika, ny asantsika, ny zontsika hiaina am-pahamendrehana, ny hoavintsika, ny fanantenantsika – ary izao ny fahafahantsika no kasainy alaina. Mialà eo amin'ny sezalavanao, ny fahitalavitra, mivoaha ny efitrano mafana sy toeram-pivarotana. Mivoaha ny fiaranao, ravao ny sakana, ary mijoroa miaraka aminay – mirehareha sy resy lahatra hiady hatramin'ny farany ho an'ny hoavintsika.
Valin’izany : olona an’arivony no nidina teny andalamben’i Tel Aviv. Maherin’ny 80 ny mpitolona voasambotra taorian’ny fifandonana mahery vaika teo amin’ny mpitolona sy ny mpitandro filaminana. Vaky ny fitaratry ny banky ary olona an-jatony no nanakana ny arabe roa lehibe sy ny làlana Ayalon. Teny faneva sahala amin’ny “mitaky fahamarinana sosialy ny mponina”, “mpanohitra daholo ny olon-drehetra” na “mitaky demokrasia ny mponina” no heno nandritry ny alina.
Ireto misy bitsika sy sary vitsivitsy tany Tel Aviv. Manoratra i Orly Barlev [heb]:
— Or-ly Barlev (@OrLyBarlev) 23 Jona 2012 
Betsaka no voasambotra. Atody no natoraka tany amin’ny lapan’ny tanàna talohan’izay. Indray voasakana ny lalana Ayalon, Gvirol ary Begin. Banky telo no voasompatra. Olona an’arivony no eo anoloan’ny lapan’ny Tanana amin’izao fotoana izao. #j14 #j14
Nitsikera i Nitay Peretz:
— Nitay Peretz (@nitayp) 23 Jona 2012 
Anatinà firenena iray izay hanitsakitsahan'ireo avara-pianarana, banky, governemanta, mpitandro filaminana sy ireo mpanapaka isanandro ny lalàna , maninona ianareo no manao resabe tampoka eo milaza fa nisy lalàna tsy voahaja?
Mampiseho ireo mpanohitra nandray ny làlamben'i Ayalon ilay mpaka sary eto ambany:
Oaoh! Voasakan'ireo mpanohitra tanteraka ny làlan'Ayalon aoTel-Aviv #occupy  #j14  #israel  twitpic.com/9zqp65 
— Gilad Lotan (@gilgul) 23 Jona 2012 
Navoaka roa andro talohan'izay ity bitsika manaraka ity nefa naverina navoaka imbetsaka izany nandritra ny nampahavesatra ny herisetra:
Mametraha tranolay any amin'ny làlan'i Rothshield dia ho voasambotra amin-kerisetra ianao. Mametraha “caravane” (fiara fitondra milasy sy mitsangatsangana) amin'ny tanin'olon-tsotra iray any amin'ireo faritra bodoina dia homena trano ianao.
Ary ho famaranana, nisy olona namoaka sary ahitàna fiaranà mpitandro filaminana nisy nanoratra. “Mishta-ra'al” no soratra hita ao ambadik'ilay fiaranà mpitandro filaminana. Ny “Mishtara” dia midika hoe mpitandro filaminana, ny “Mishtar” midika hoe fitondrana, ary ny “ra'al’ dia midika hoe poizina. Ilay tsilalaonteny dia milaza hoe samy poizina avokoa na ny governemanta na ny mpitandro filaminana.
Ireto misy rohin-kevitra ho anareo izay te-hanaraka ny hetsika Israeliana mitaky fahamarinana sosialy :
– Ny livestream raitran'i Elian 
– #J14 ao amin'ny Twitter 
– J14 amin'ireo fanavaozana vaovao ao amin'ny Facebook ho an'ny daholobe 
– Ny vohikala ofisialin'ny J14 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/28/34644/
 Niantso ireo mpomba azy: http://j14.org.il/articles/27663
 23 Jona 2012: https://twitter.com/OrLyBarlev/status/216654301618110464
 23 Jona 2012: https://twitter.com/nitayp/status/216647379930193921
 23 Jona 2012: https://twitter.com/gilgul/status/216641950953111553
 livestream raitran'i Elian: http://www.ustream.tv/channel/occupyisrael
 #J14 ao amin'ny Twitter: https://twitter.com/#!/search/realtime/%23j14
 J14 amin'ireo fanavaozana vaovao ao amin'ny Facebook ho an'ny daholobe: https://www.facebook.com/search/results.php?q=j14&type=eposts&init=quick&tas=search_preload
 vohikala ofisialin'ny J14: http://j14.org.il/